SM သို့မဟုတ် PM Fiber ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများနှင့် 1530nm Pigtailed DFB လေဆာ Diode - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > SM သို့မဟုတ် PM Fiber ဖြင့် 1530nm Pigtailed DFB လေဆာ Diode
SM သို့မဟုတ် PM Fiber ဖြင့် 1530nm Pigtailed DFB လေဆာ Diode
SM နှင့် PM fiber နှင့်အတူ 1530nm pigfiled DFB Laser Diode အတွက် OEM နှင့်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု 14-pin butterfly လေဆာရောင်ခြည်၊ single-mode သို့မဟုတ် polarization များဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့် TEC, thermistor နှင့် photodiode နှင့်အတူ fiber-coupled FC / APC FC / PC SC / APC SC / PC connector ကိုထိန်းသိမ်းသည်။
SM သို့မဟုတ် PM fiber နှင့်အတူ 1530nm Pigtailed DFB Laser Diode ၏အကျဉ်းချုပ်
SM သို့မဟုတ် PM fiber နှင့်အတူ 1530nm Pigtailed DFB လေဆာ Diode ၏နိဒါန်း
SM နှင့် PM fiber နှင့်အတူ 1530nm pigfiled DFB Laser Diode အတွက် OEM နှင့်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု 14-pin butterfly laser diodes, single-mode သို့မဟုတ် polarization သည် fiber / coupled FC / APC connector ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ TEC, thermistor နှင့် photodiode နဲ့အတူ။
SM သို့မဟုတ် PM fiber နှင့်အတူ 1530nm Pigtailed DFB Laser Diode ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
Built-in TEC cooler;
10mW 20mW Output ပါဝါ;
4. SM သို့မဟုတ် PM ဖိုင်ဘာဖြင့် 1530nm Pigtailed DFB Laser Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
CW 1530nm လေဆာအရင်းအမြစ်။
SM သို့မဟုတ် PM အမျှင်များဖြင့် 1530nm Pigtailed DFB လေဆာ Diode ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25âƒ)
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1528 1530 1532 nm
၆။ ထုပ်ပိုးပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1530nm Pigtailed DFB Laser Diode SM သို့မဟုတ် PM ဖိုင်ဘာဖြင့်
၇။ 3030nm Pigtailed DFB Laser Diode ကို SM သို့မဟုတ် PM ဖိုင်ဘာဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။
hot Tags:: 1530nm SM သို့မဟုတ် PM အမျှင်နှင့်အတူ Pigtailed DFB လေဆာ Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကား, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, Bulk, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်, စျေးပေါ, အနိမ့်စျေး, အရည်အသွေး
SM Fiber နှင့်အတူ 1530nm Pigtailed DFB လေဆာ DiodePM Fiber နှင့်အတူ 1530nm Pigtailed DFB လေဆာ Diode